नुवाकोट गोर्खुमा पुल भाँचिएपछि आवागमन रोकियो, कारोबार पनि ठप्प !
| 2018-08-21 Published
निर्माण सञ्चार, रसुवा । वर्षौं सञ्चालित तातोपानी नाका रोकिएपछि सर्वाधिक महत्त्व दिँइदै आएको चीन नेपाल बोर्डर रसुवागढीमा ४ सय बढी मालबाहक वाहन रोकिएका छन् ।
पहिरोका कारण अवागमन नै ठप्प हुने गरी चार दिनदेखि रोकिएको उक्त मार्गको अवरोध पन्छाई आवागमन सुचारु गर्नेबारे सरकारको ध्यान भने गएको छैन ।
रसुवागढी–काठमाडौं राजमार्गमा यतिबेला दर्जन बढी पहिरोहरु थुप्रिएका छन् ।
तातोपानी नाका पनि सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा यतिबेला चीन नेपाल सम्पर्क मार्ग विच्छेद भएको छ । नुवाकोटस्थित गोर्खुको पुल नदीले बगाएपछि पनि तिब्बत नेपाल सम्पर्क विच्छेद बनेको हो ।
आवागमन ठप्प भएपछि रसुवागढी नाकामा मात्रै झन्डै साँढे २ अर्ब रुपियाँ बराबरको सामान बोकेका ४ सय बढी ट्रक र कन्टेनरहरु रोकिएका छन् ।
व्यवसायीलाई मर्का, करोडौंका सामान बाटोमै अलपत्र !
बाटो खुलाई आवागमन सुचारु गर्नेबारे सरकारको ध्यान नगएपछि व्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन् । बाटो अवरुद्ध भएपछि चीनबाट आयात भएका करोडौं मूल्य बराबरका सामान अलपत्र तथा खाद्यान्नहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पहिरो कहाँ कहाँ ?
गत हप्ता केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण चीनसँग जोडिएको रसुवागढी नाका आसपास क्षेत्र बन्द हुन पुगेको हो ।
रसुवाको हिमाली क्षेत्रमा भीषण वर्षा भएपछि धुञ्चे–स्याप्रु क्षेत्रमा दर्जन बढी स्थानमा पहिरो गएकाले आवागमन ठप्प भई मालबाहक ट्रकहरु बाटोमै थन्किएको रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको हो ।
पुल बाढीले बगाएपछि
यस क्षेत्रमा पर्ने बाटो पहिरो र पुल बाढीले बगाएको अवस्था छ । गएको साउन १२ गते भएको वर्षाले रसुवा जिल्लाको घट्टेखोला पुल बाढीले बगाएको छ ।
जसले गर्दा यहाँको आवागमन रोकिएको हो ।
रसुवागढीको सडक विभिन्न ठाउँमा पहिरोले बगाएको अवस्था छ भने स्याफ्रुबेसी स्थित सडकमा पनि विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको छ ।
त्यस्तै, राम्चे क्षेत्रमा वर्षौदेखि सडकको बेहाल हुँदा पनि सरकारले हेरेकै छैन ।
बाटो खुलाई आवागमन सुचारु गर्नेबारे सरकारको ध्यान नगएपछि व्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन् । बाटो अवरुद्ध भएपछि चीनबाट आयात भएका करोडौं मूल्य बराबरका सामान अलपत्र तथा खाद्यान्नहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्
केही समयअघि बाढीले बगाएको सकड मर्मत गर्न सरकारले नेपाली सेनालाई आग्रह गरे पनि सेनाले सुरु गरेको कामले सोचे जस्तो गति नलिदा अवागमनका कारण करोडौंको कारोबार पनि रोकिन पुगेको स्थानीय बताउँछन् ।
यतिबेला सेनाले विष्फोटक पदार्थ पड्काएर सडक बनाउने तयारी गरिरहेको बताए पनि महिनौंदेखि काम अघि बढेको देखिदैन ।
सरकार के हेरिरहन्छौ ?
यसरी बाटोदेखि पुलसमेत भत्किदा सरकारी तहबाट चासो नदिएको अलपत्र यात्रु तथा मालबाहक गाडी मालिकहरुको गुनासो छ ।
भत्केको सडक मर्मतका लागि स्थानीय निकायले पनि कुनै पहल गरेको छैन भने वर्षा नरोकिइकन काम गर्न नसकिने उनीहरुको बुझाइ छ ।
तर सामान्य मर्मतले पनि खुल्नसक्ने बाटो नखोलाउँदा करोाडौंका माल लिएर बसेका गाडीहरु बाटोमै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
रसुवागढी हुँदै काठमाडौं भित्रिने सामान तथा स्याउ, फलफूल बाटोमै अलपत्र परेपछि व्यापारीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
४६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको गल्छी–रसुवागढी सडक नयाँ निर्माण गरी कालोपत्रे गर्न सरकारले जिम्मा दिइसकेको अवस्था छ ।
सरकारी स्रोत अनुसार उक्त बाटो कलोपत्रे सहित दुई लेनको बनाउने गरी काम अघि बढिरहेको छ । ठेक्का दिने प्रक्रियामै छ सेनाले ट्रयाक खोलिदिएको १८ किलोमिटरको सडक खण्ड ।
उक्त १८ किमी सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम पनि चीनले नै गरिदिने सहमति भएको छ ।
तर, सरकार भने चीनले कहिले गर्ला भनी हेरी बसेको छ । सरकारी मौनताले उक्त सडक निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन ।
गोर्खुमा पुल भाँचिएपछि आवागमन रोकियो, कारोबार पनि ठप्प !
बाढीले नुवाकोटस्थित गोर्खुको पुल बगाएपछि चीन जाने यो सडक पनि ३ दिनदेखि ठप्प छ । गेर्खुखोलाको पुल विदुर नगरपालिकामा पर्छ । जुन पुल हुँदै रक्सौल-गल्छी-त्रिशूली-धन्चे-रसुवागढी बीचमा आवागमन हुने गथ्र्याे ।
सरकारी काम कहिले जाला घाम !
यस सडक खण्ड सञ्चालनका लागि अस्थायी डाइभर्सन बनाउने काम चालू छ । तर पनि कामले गति नलिदा भत्केको सडकबाट थुनिएका गाडीहरुले उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।
पासाङल्हामु मार्ग अन्तर्गत पर्ने उक्त पुल बाढीले बगाएपछि खोलाबाट अस्थायी डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गराउने काम अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन् ।
विदुर नगरपालिका- १ इन्द्रायणीचौरका वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपालले पुल बगाएपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको पुष्टि गरेका छन् ।
पुल भत्केपछि पासाङल्हामु मार्गमा रहेको त्रिशूली-बेत्रावती-धुन्चे सडकखण्डमा गुड्ने ४ सय बढी यात्रुबाहक सवारीसधान रोकिएका हुन् ।
बाढीले पुलको रसुवापट्टिको सडक १० मिटर बगाएको छ भने रसुवालाई काठमाडौँसँग जोड्ने सडक पनि अवरुद्ध छ । जसले गर्दा सयौं यात्रु बाटोमै अलपत्र छन् ।
मंगलबार, ०५ भदौ, ०७५